Dɛn na Bible Ka Fa Owu Akyi Asetena Ho?
Ɔwɛn-Aban | No. 4 2017
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
ASƐM A ƐDA SO | DƐN NA BIBLE KA FA OWU NE NKWA HO?
Nea Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho
Sɛ yebue Bible no kɔ Genesis na yɛkenkan adebɔ ho asɛm a, yehu sɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ onipa a odi kan, Adam sɛ: “Turom ha nnua nyinaa, di bi. Na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no de, nni bi, efisɛ da a wubedi bi no, owu na wubewu.” (Genesis 2:16, 17) Nea saa asɛm no kyerɛ ara ne sɛ, sɛ Adam dii Onyankopɔn mmara yi so a, anka ɔrenwu, na mmom anka ɔbɛkɔ so atena Eden turo no mu.
Adam yɛɛ osetie a, anka ɔbɛtena ase daa. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ bere a ne yere Hawa de aduaba a Onyankopɔn abara maa no no, ɔboapa buu n’ani guu Onyankopɔn mmara so na ogye dii. (Genesis 3:1-6) Asoɔden a wɔyɛe no, yɛda so ara rehu ho amane nnɛ. Ɔsomafo Paulo kyerɛkyerɛɛ asɛm yi mu sɛ: “Ɛnam onipa biako so na bɔne baa wiase, na owu nam bɔne so bae, ma owu trɛw kaa nnipa nyinaa, efisɛ wɔn nyinaa ayɛ bɔne.” (Romafo 5:12) ‘Onipa baako’ a Bible ka ne ho asɛm no, ɔno ne Adam. Bɔne bɛn na wɔreka ho asɛm no? Adɛn nti na ɛkɔfaa owu bae?
Adam boapa buu Onyankopɔn mmara so; ɛno ne bɔne no. (1 Yohane 3:4) Bɔne nso deɛ, ɛso akatua ne owu sɛnea na Onyankopɔn aka akyerɛ Adam no. Mmere tenten a na Adam ne ne mma a ɔbɛwo wɔn daakye no bɛkɔ so adi Onyankopɔn mmara so no, na bɔne remma wɔn ho, na na wɔrenka owu nso nhwɛ da. Onyankopɔn ammɔ nnipa sɛ yenwu. Ɔbɔɔ yɛn sɛ yɛntena ase daa.
Sɛnea Bible aka no, owu ‘atrɛw aka nnipa nyinaa.’ Obiara ntumi nnye asɛm yi ho kyim. Nanso, yemmisa sɛ biribi hyɛ yɛn mu a sɛ yewu a, ɛno deɛ ɛkɔ so tena ase anaa? Nnipa pii bɛka sɛ aane, biribi hyɛ yɛn mu a yɛfrɛ no ɔkra a ɛno deɛ enwu da. Sɛ nkurɔfo ka saa a, nea ɛkyerɛ ara ne sɛ, Onyankopɔn dii atoro kyerɛɛ Adam. Adɛn nti na yɛreka saa? Efisɛ sɛ yewu na biribi a ɛhyɛ yɛn mu tumi fi yɛn mu kɔtena baabi a, ɛnde yɛrentumi nka sɛ owu yɛ bɔne ho asotwe, sɛnea Onyankopɔn kae no. Bible ka sɛ: “Onyankopɔn ntumi nni atoro.” (Hebrifo 6:18) Nokwasɛm ne sɛ, Satan mmom na odii atoro ka kyerɛɛ Hawa sɛ: “Ɛnyɛ owu na mubewu.”​—Genesis 3:4.
Wei ma asɛmmisa bi sɔre. Ɛne sɛ, Sɛ ɔkra a enwu da nkyerɛkyerɛ no nam atorodi so na ɛbae a, ɛnde sɛ obi wu a, ɛhe paa na ɔkɔ?
BIBLE MA YENYA NKYERƐKYERƐMU A EMU DA HƆ
Adebɔ ho asɛm a wɔakyerɛw wɔ Genesis no ka sɛ: “Yehowa Nyankopɔn de fam dɔte nwenee onipa na ohuw nkwa home guu ne hwene mu, na onipa no bɛyɛɛ ɔkra teasefo, [anaa ɔteasefo].” Hebri asɛmfua ne’phesh * na wɔkyerɛɛ ase “ɔteasefo.” Nea ɛkyerɛ ankasa ne “abɔde a ɔhome.”​—Genesis 2:7.
Bible ma emu da hɔ pefee sɛ, bere a Onyankopɔn bɔɔ onipa no, wamfa ɔkra a enwu da biara anhyɛ onipa mu. Mmom, onipa biara yɛ “ɔteasefo.” Ɛno nti na sɛ wohwehwɛ Bible mu sɛ dɛn ara a, worenhu baabiara a Bible de asɛm “ɔkra a enwu da” yɛ adwuma no.
Sɛ Bible nka sɛ onipa wɔ biribi a yɛfrɛ no ɔkra a enwu da a, ɛnde adɛn nti na ɔsom ahorow pii kyerɛkyerɛ saa? Sɛ yebenya asɛm yi ho mmuae a, gye sɛ yɛn nyinaa dan yɛn ani kyerɛ tete Egypt.
ABOSONSOM NKYERƐKYERƐ BI MU TRƐWEE
Aka bɛyɛ mfe ahanan ama wɔawo Yesu no, Helani abakɔsɛm kyerɛwfo Herodotus kaa sɛ Egyptfo na “wodii kan kaa no denneennen sɛ onipa wɔ ɔkra a enwu da.” Tete Babilonfo nso sosɔɔ ɔkra a enwu da nkyerɛkyerɛ no so. Ebeduu bere a Alexander Ɔkɛseɛ no dii Middle East so nkonim wɔ afe 332 A.Y.B. no, na Hela nyansapɛfo atrɛw saa nkyerɛkyerɛ no mu, na ankyɛ na nkyerɛkyerɛ no trɛw faa Hela Ahemman no mu nyinaa.
Sɛ wohwehwɛ Bible mu sɛ dɛn ara a, worenhu asɛm, “ɔkra a enwu da” wom
Asomafo no bere so no, Yudafo akuw atitiriw mmienu, Essenfo ne Farisifo nso kyerɛkyerɛɛ sɛ sɛ obi wu a, ne kra no kɔ so ara tena ase. Nhoma bi ka sɛ: “Helafo nkyerɛkyerɛ a Yudafo suae no na ɛma wobegye dii sɛ ɔkra a enwu da bi wɔ hɔ. Plato nyansapɛ nso ka ho bi paa na Yudafo no nyaa saa gyidi no.” (The Jewish Encyclopedia) Josephus yɛ Yudani abakɔsɛm kyerɛwfo a ɔno nso tenaa ase wɔ asomafo no bere so. Ɔkaa sɛ, ɔkra a enwu da nkyerɛkyerɛ no nni Kyerɛw Kronkron no mu, na mmom efi “Helafo gyidi” mu. Ɔkyerɛe sɛ Helafo anansesɛm akyerɛwfo na ɛde saa nkyerɛkyerɛ no bae.
Bere a Helafo amammerɛ kɔɔ so trɛwee no, wɔn a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ Kristofo nso begyee saa abosonsomfo nkyerɛkyerɛ yi toom. Abakɔsɛm kyerɛwfo Jona Lendering nso kaa sɛ, “Plato kyerɛkyerɛe sɛ bere bi na yɛn kra te baabi pa, nanso seesei de abɛtena wiase bɔne mu. Saa nkyerɛkyerɛ yi nti, anyɛ den sɛ wɔde Plato nyansapɛ ne Kristosom bɛfrafra.” Saa na ɛyɛe a ɔkra a enwu da nkyerɛkyerɛ a efi abosonsom mu no bɛhyɛɛ “Kristofo” asɔre ahorow mu, na abɛka wɔn nkyerɛkyerɛ atitiriw ho.
“NOKWARE NO BƐMA MOADE MO HO”
Ɔsomafo Paulo a ɔtenaa ase wɔ tete Kristofo bere so no bɔɔ kɔkɔ sɛ: “Asɛm a efi honhom mu no ka pefee sɛ akyiri yi mmere mu no, ebinom bɛtwe wɔn ho afi gyidi no ho akodi nnaadaasɛm a efi honhom mu ne adaemone nkyerɛkyerɛ akyi.” (1 Timoteo 4:1) Hwɛ sɛnea saa asɛm no abam! “Adaemone nkyerɛkyerɛ” no, emu baako ne ɔkra a enwu da. Bible mfoa saa nkyerɛkyerɛ yi so. Mmom efi tete abosonsom ne nyansapɛ ahorow mu.
Nea ɛsɛ sɛ ɛma yɛn ani gye ne sɛ, Yesu kaa sɛ: “Mubehu nokware no, na nokware no bɛma moade mo ho.” (Yohane 8:32) Ɔsom ahorow pii nkyerɛkyerɛ ne nneyɛe gu Onyankopɔn ho fĩ. Nanso esiane sɛ yɛate nokware a ɛwɔ Bible mu no ase yiye nti, yɛade yɛn ho afi ho. Bio nso, atetesɛm ne gyidihunu a nkurɔfo de bata owu ho no, nokware a ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm mu ama yɛade yɛn ho afi ho.​—Hwɛ adaka a n’asɛmti ne “ Ɛhe na Awufo Wɔ?”
Ná ɛnyɛ yɛn Bɔfo no adwene ne sɛ nnipa bɛtena asase so mfe 70 anaa 80 pɛ, na akyiri yi wakɔtena ase daa wɔ baabi foforo. Nea enti a ɔbɔɔ nnipa ne sɛ yɛbɛyɛ mma a yetie n’asɛm, na yɛatena ase daa wɔ asase yi ara so. Adwene a Onyankopɔn de bɔɔ nnipa yi kyerɛ sɛ ɔdɔ yɛn, na biribiara ntumi nsesa Onyankopɔn adwene. (Malaki 3:6) Onyankopɔn de ne honhom kaa odwontofo bi ma ɔmaa yɛn awerɛhyem sɛ: “Treneefo benya asase no adi, na wɔatena so daapem.”​—Dwom 37:29.
^ nky. 9 Bible nkyerɛase bi te sɛ King James Version ne Catholic Douay Version, kyerɛ ne’phesh ase “ɔkra teasefo.” Nanso, nkyerɛase pii a wɔayɛ no nnansa yi te sɛ The New English Bible kyerɛ ne’phesh ase “abɔde a ɔte ase.” New International Version ne The Jerusalem Bible kyerɛ ase “ɔteasefo.” Today’s English Version nso kyerɛ ase tiawa sɛ “ofii ase homee.”
Enti Nnipa Betumi Atena Ase Daa?
Mfe kakra a atwam ni, nyansahufo yɛɛ nhwehwɛmu bi. Wɔkyerɛ sɛ wɔahu afifide bi wɔ po ase. Wogye di sɛ saa afifide no adi mfe mpempem pii, na ebetumi aba sɛ ɛno ne abɔde a nkwa wom a akyɛ paa wɔ asase yi so. Ɛyɛ sare ahorow a ɛwɔ po ase, na ɛwɔ Mediterranea po no mu. Saa sare yi ka Posidonia oceanica sare abusua no ho. Ɛtrɛw fi Spain kɔka Cyprus.
Enti sɛ afifide bi betumi anyin akyɛ saa a, ɛnde nnipa nso ɛ? Nyansahufo bi a wɔasua onyinkyɛ ho ade akyerɛ sɛ wɔwɔ anidaso sɛ nnipa betumi anyin akyɛ. Nhwɛso bi ni. Nhoma bi a ɛka onyinkyɛ ho asɛm akyerɛkyerɛ saa asɛm no mu sɛ wɔnam “nyansahu so ayɛ onyinkyɛ ho nhwehwɛmu adu akyiri paa.” Baabi a nyansahufo ayɛ nhwehwɛmu adu no, daakye na yebehu sɛ wobetumi aboa ama nnipa anyin akyɛ anaa.
Nanso sɛ nnipa betumi atena ase daa a, ennyina nhwehwɛmu a nyansahufo reyɛ no nnɛ no so. Bible twe yɛn adwene kɔ yɛn Bɔfo Yehowa Nyankopɔn so, na ɛka sɛ: “Efisɛ wo nkyɛn na nkwa nsuti wɔ.” (Dwom 36:9) Yesu Kristo bɔɔ Onyankopɔn mpae sɛ: “Eyi ne daa nkwa, sɛ wobehu wo, nokware Nyankopɔn koro pɛ no, yiye, ne nea wosomaa no no, Yesu Kristo.” (Yohane 17:3) Nokwasɛm ne sɛ, mmɔden a yɛrebɔ sɛ yebehu Yehowa Nyankopɔn ne ne Ba Yesu Kristo na yɛayɛ nea ɛsɔ wɔn ani no, ɛno na ɛbɛma yɛanya nhyira a ɛtena hɔ daa.
Nyansahufo gye di sɛ afifide ahorow bi a ɛka saa po ase sare yi abusua ho no adi mfe mpempem pii
ƐHE NA AWUFO WƆ?
Bible ka no tiawa sɛ awufo wɔ adamoa mu, na wɔretwɛn owusɔre. (Yohane 5:28, 29) Awufo nhu amane, na wɔnte yaw biara nso, efisɛ “awufo de, wonnim biribiara.” (Ɔsɛnkafo 9:5) Bere a na Yesu rekyerɛkyerɛ no, ɔde owu totoo nnahɔɔ ho. (Yohane 11:11-14) Enti enhia sɛ yesuro wɔn a wɔawuwu no, na enhia nso sɛ yɛbɔ afɔre de pata wɔn. Awufo rentumi mmoa yɛn, na saa ara nso na wɔrentumi nhaw yɛn. Nea enti a ɛte saa ne sɛ, “adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa biara nni Adamoa mu.” (Ɔsɛnkafo 9:10) Onyankopɔn beyi owu afi hɔ daa, na ɔnam owusɔre so na ɛbɛyɛ saa.​—1 Korintofo 15:26, 55; Adiyisɛm 21:4.
Nea Enti a Wubetumi Agye Nea Bible Ka Adi
Yebetumi asi yɛn bo paa aka sɛ nea Bible ka no yebetumi de yɛn ho ato so. Adɛn ntia? Susuw nea edidi so yi ho hwɛ:
Ne Kyerɛwfo Da Nsow: Nhoma 66 na ɛbom yɛ Bible. Nnipa bɛyɛ 40 na wɔkyerɛwee. Egyee bɛboro mfe 1,600 ansa na wɔrekyerɛw Bible no awie. Wofii ase kyerɛw Bible no afe 1513 A.Y.B., na wɔkyerɛw wiei bɛyɛ afe 98 Y.B. Wei nyinaa akyi no, emu nsɛm nyinaa hyia, na ɛtɔ asom. Wei kyerɛ sɛ ade nyinaa so tumfoɔ Nyankopɔn no ankasa na ɔkyerɛw Bible no. Ɔno na ɔkaa nsɛm no maa mmarima no kyerɛwee.
Emu Nsɛm ne Abakɔsɛm Hyia: Nsɛm a asisi a wɔakyerɛw wɔ Bible mu ne abakɔsɛm a edi mũ hyia pɛpɛɛpɛ. Nhoma bi ka sɛ: “Nkurɔfo a wɔkyerɛw ɔdɔ ho nsɛm, anansesɛm, ne adansekurum nhoma nkyerɛ beae ne bere pɔtee a asɛm bi sii, . . . nanso Bible deɛ, sɛ ɛka asɛm bi a, ɛkyerɛ beae ne bere pɔtee a asɛm no sii pɛpɛɛpɛ.”​—A Lawyer Examines the Bible.
Emu Nsɛm ne Nyansahu Hyia: Bible nyɛ nyansahu nhoma, nanso sɛ ɛka nyansahu ho asɛm a, ɛka no pɛpɛɛpɛ. Bible dii kan kaa nsɛm bi bere tenteenten ansa na nnipa rebehu. Nhwɛso bi ni. Sɛ wohwɛ Leviticus nhoma no ti 13 ne ti 14 a, wubehu ahonidi ne ayarefo a woyi wɔn fi nnipa mu ho mmara pii a wɔde maa Israelfo no. Bible kaa wei ho asɛm bere tenteenten ansa na nyansahufo rehu mmoawammoawa a wɔde yare ba ne nsanyare ho nsɛm. Bible san ka sɛ, asase yɛ kurukuruwa, na ɛsensɛn wim a hwee nkura mu. Egyee mfe ɔhaha pii ansa na nyansahufo retumi ate saa nsɛm yi ase.​—Hiob 26:7; Yesaia 40:22.
Weinom nyinaa yɛ nhwɛso kakraa bi a edi adanse sɛ Bible no yɛ nokware. Bible ka sɛ: “Kyerɛwnsɛm no nyinaa fi Onyankopɔn honhom mu, na eye ma ɔkyerɛkyerɛ, ntɛnyi, nneɛma ateɛteɛ.”​—2 Timoteo 3:16.
Anidaso wɔ Hɔ Ma Awufo—Wobɛyɛ Dɛn Ahu sɛ Ɛyɛ Nokware?
Bible ma yɛhu nneɛma mmienu nti a yɛbɛtumi agye adi paa sɛ owɔsɔreɛ no bɛba.
Share Share Nea Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho
ASƐM A ƐDA SO Asɛm Bi a Ɛkyere Adwene
ASƐM A ƐDA SO Nea Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho
Bere a Owuyare Abɔ Wo Dɔfo Bi
Elias Hutter ne Hebri Bible Ahorow a Ɔyɛe a Ɛda Nsow No
Hebri Nkyerɛwde Ketewaa no Ma Yenya Awerɛhyem Kɛse
Paradise Wɔ Asase So—Nnaadaa Anaa Nokwasɛm?
Adɛn Nti na Nnipa Wu?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN Dɛn na Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN Dɛn na Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho?
Share Share ƆWƐN-ABAN Dɛn na Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho?
Dɛn na Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho?
ƆWƐN-ABAN Dɛn na Bible Ka Fa Owu ne Nkwa Ho?
Dɛn Ne Bɔne?
Dɛn Ne Ɔkra?